हुवावे किन विवादित छ ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण हुवावे किन विवादित छ ?
हुवावे किन विवादित छ ?
अहिले वायरलेस उद्योगमा चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावे सबैभन्दा ठूलो रहस्य बनेको छ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार उपकरण आपूर्तिकर्ता हो । स्मार्टफोन बजारमा पनि यो दोस्रो स्थानमा छ । पाँचौं पुस्ता (फाइभजी) प्रविधिमा पनि यो निकै अगाडि छ । तर, अमेरिकाले हुवावेको उपकरण प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा धरापमा पर्ने भन्दै यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बेलायत, न्यूजील्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायत कयौं देशले धमाधम यसलाई बहिष्कार गरिरहेका छन् । विवाद बढ्न थालेपछि हुवावेले अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई बोलाएर एकपछि अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्ने क्रम तीव्र पारेको छ । इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध तोडेको आरोपमा क्यानडामा पक्राउ परेकी हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मङ वाञ्चाउलाई अमेरिका सुपर्दगी गर्ने मुद्दा खारेज गराउन कम्पनी संघर्षरत छ । अमेरिकाले पनि कम्पनीको केही वर्ष पहिला हुवावेको कर्पोरेट सेवा ह्याक गरेको थियो । हुवावे यति धेरै विवादमा किन मुछिइरहेको छ ?
इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबास्थित अफ्रिकी संघ (एयू)को मुख्यालयको सर्भरबाट लगातार १ हजार ८ सय २५ दिनसम्म मध्यरातमा डाटाहरू चोरी भएको सन् २०१८ को शुरूमा फ्रान्सेली पत्रिका ल मोँद अफ्रिकीले समाचार छाप्यो । यी डाटा ८ हजार किमीभन्दा टाढा साङहाईस्थित सर्भरमा पठाइएको थियो । समाचार मुुख्यालयको भित्ता र डेस्कहरूमा माइक्रोफोन लगायत जासूसीमा प्रयोग हुने उपकरणहरू भेटियो । उक्त मुख्यालय चिनियाँ विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बनेको थियो । त्यहाँ जडित सूचना तथा सञ्चारप्रविधि हुवावेले उपलब्ध गराएको हो । एयू र चिनियाँ अधिकारीहरूले ल मोँदको समाचार झूटो भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरे ।
समाचारमा हुवावेको नाम कतै उल्लेख थिएन । यो घटनामा हुवावेको हात छ भन्ने प्रमाण पनि छैन । तर, आफूले उपलब्ध गराएको आईसीटी सेवाबाट ५ वर्षसम्म हरेक दिन ठूलो मात्रामा डाटा चोरी हुँदा कम्पनी यसबारे कसरी अनभिज्ञ रहन सक्छ ?
चोरी हुवावेले उपलब्ध गराएको प्रविधिबाट नभएको र डाटा सेन्टर लगायत एयूको परियोजनामा डाटा स्टोरेज वा स्थानान्तरणको फङ्शन नै नभएको भन्दै त्यतिबेला कम्पनी प्रवक्ताले कम्पनीको बचाउ गरेका थिए । तर, यसले चीन सरकारले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रभावमा पारेर अरू देशको जासूसी गरिरहेको शंका भने बढायो ।
अमेरिकाको हाउस इन्टेलिजेन्स कमिटीले चीन सरकार र कम्पनीबीचको सम्बन्ध रहेको बताएपछि सन् २०१२ मा अमेरिकाले हुवावेको दूरसञ्चार उपकरण प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । अमेरिकी सरकारले १ दशकभन्दा लामो समयदेखि नै हुवावेलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकाइभन्दा बढी ठानेको छैन ।
कम्पनीमाथि शंका बढ्नुको अन्य कारण पनि छन्, ती हुन् : कम्पनीका संस्थापक रन चङफईको सेनामा संलग्नता, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को सदस्यता र राष्ट्रिय जासूसी गतिविधिमा सघाउनैपर्ने चिनियाँ कानून । चङफई कुनै समय जनमुक्ति सेनाका लडाकू थिए । सेनाको सूचनाप्रविधि अनुसन्धान एकाइमा प्राविधिकबाट उनी इञ्जिनयिरसम्म भए । सेना छाडेको ५ वर्षपछि सन् १९८७ मा उनले हुवावे स्थापना गरे । सन् १९९६ मा कम्पनीलाई चीन सरकारले ‘नेशनल च्याम्पियन’को उपाधि दियो । सन् २००० पछि कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि राम्रै आम्दानी गर्न थाल्यो । ५ हजार डलरमा शुरू गरेको कम्पनीले अहिले वर्षमै झन्डै अर्बौं डलर कमाइरहेको छ । तर, अधिकांश कमाइ विदेशबाट हुन्छ ।
तीन दशकसम्म कम्पनीले विदेशमा बजार विस्तार गर्न निकै संघर्ष गर्‍यो । हरेक वर्ष अनुसन्धान र विकासमा मात्रै अर्बांै डलर खर्चियो । कम्पनीले नयाँनयाँ उत्पादनमा हात हाल्यो । अनि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको वृद्धि–विस्तार अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । यसैबीच सरकारसँगको साँठगाँठकै कारण कम्पनीले यति धेरै सफलता पाएको भन्ने हल्ला पनि चल्यो । सरकारले भन्यो भन्दैमा आप्mनो उपभोक्ताको तथ्यांक नदिने र जासूसीका लागि बाटो नखोल्ने दाबी रनले बारम्बार गर्दै आएका छन् । कम्पनीले अहिले अर्बौं डलर कमाइरहेको र सरकारी आदेशमा कम्पनीको भविष्य नै धरापमा पार्ने काम कदापि गर्दिनँ भन्छन्, रन ।
तर, विदेशी विश्लेषकहरू भने चीनमा सरकारप्रति इमानदारी देखाउनैपर्ने व्यवस्था छ भन्छन् । कम्पनीमा पारदर्शिता नभए पनि नहोस् । तर, कानून र सरकारको आदेशको अनुपालना गर्नुको कुनै विकल्प छैन । विगत केही वर्षमा सरकारले निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पार्टीको नियमसँग सहकार्य गर्ने दबाब बढाइरहेको छ । अनुपालना गर्न नमान्दा कम्पनीको हविगत के हुन्छ भन्ने घरेलु अनलाइन ट्याक्सी सेवाप्रदायक कम्पनी तिती छुसिङले सामना गरिरहेको समस्या र संघर्षले नै देखाउँछ ।
चीन सरकारले सन् २०१७ को जुनमा ‘नेशनल इन्टेलिजेन्स ल’ ल्यायो । सो कानूनले हरेक कम्पनी, संगठन वा व्यक्तिलाई सरकारको जासूसी गतिविधिमा सघाउन र यस्तो कामलाई गोप्य राख्न बाध्य पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । कानूनले नागरिक र कम्पनीलाई विश्वभर जुनसुकै स्थानमा जासूसी गर्न र सूचनाहरू जम्मा गर्न बाध्य पारेको छ भन्ने बुझाइ अन्तरराष्ट्रिय जगत्को छ । हुवावेको फाइभजी प्रविधिले अहिले बा≈य बजारमा सामना गरिरहेको समस्या चुरोमा सोही कानून छ ।
चीन सरकारले अहिले जसरी हुवावेको बचाउ गरिरहेको छ यसले पनि आशंका बढाएको छ । पेचिङले हुवावे र मङको बचावमा खुलेर बोल्यो, प्रतिकारमा क्यानडेली नागरिकहरू नै पक्रियो । कम्पनीको संरचनाले आगोमा घ्यू थपेको छ । हुवावे शेयरबजारमा सूचीकृत छैन । यसमा रनको १ दशमलव ४२ प्रतिशत शेयर छ । बाँकी शेयर कर्मचारीको नाममा छ । कर्मचारीको नाममा रहेका यी शेयर हुवावेको सहायक कम्पनी सेञ्चेन हुवावे इन्भेस्टमेन्ट एन्ड होल्डिङ कम्पनीको नाममा छ । कम्पनीलाई भविष्यमा शेयरबजारमा सूचीकृत गर्ने योजनै छैन, रनको ।
कम्पनीलाई विवादित बनाइराख्नुमा अमेरिकी स्वार्थ हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । हुवावेलाई दबाएर चिनियाँ फाइभजी प्रविधिलाई फस्टाउन नदिने र घरेलु कम्पनीको संरक्षण गर्ने र अन्य बजारमा पनि आफ्नो वर्चस्व बढाउने अमेरिकी रणनीति छ भन्ने अफवाह पनि चलेको छ । प्रविधिको मामिलामा हुवावे प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीहरूको तुलनामा निकै अगाडि छ । अरूले दिनेभन्दा १० प्रतिशत सस्तो मूल्यमै उपकरणहरू दिने हैसियतमा ऊ छ । त्यसैले यसलाई दबाउन जासूसीको आरोप लगाएको आकलन पनि छ । तर, जासूसीमा कम्पनी संलग्न छ भन्ने प्रमाण नभएझैं यो कुराको पनि प्रमाण छैन ।
Interesting story. But, how come she got all the secret information? Did she hacked the server of Huawei? Whole story is smelling fishy.